यस कारण जन्मिन्छन् जम्ल्याहा, एउटा टाउको र चार हात भएका बच्चा – Vision Khabar
यस कारण जन्मिन्छन् जम्ल्याहा, एउटा टाउको र चार हात भएका बच्चा
। ४ आश्विन २०७५, बिहीबार ०८:३६ मा प्रकाशित
भारतको उत्तर प्रदेशको गोरखपुरमा एउटा बच्चा चार खुट्टा र दुई वटा लिङ्गका साथ जन्मियो, तर जन्मेको दुई दिनपछि नै बच्चाको मृत्यु भयो । यो घटना गोरखपुरको सहजनवा गाउँको हो, जहाँको सरकारी अस्पतालमा १५ सेप्टेम्बरका दिन उक्त बच्चा जन्मिएको थियो।
बीबीसीसँग कुरा गर्दै उक्त परिवारको छिमेकमा रहने एक महिलाका अनुसार बच्चा जन्मेको दुई दिनमा बच्चाको मृत्यु भयो । उनी भन्छिन्–बच्चाको चार खुट्टाका साथै दुई वटा लिङ्ग थियो, जसका कारण बच्चाले दिसापिसा वगर्न सकिरहेको थिएन । यसका साथै शरीरमा दिसा त्याग गर्ने स्थान पनि थिएन ।
उनले भनिन्, जतिबेला सोनोग्राफी रिपोर्टको कुरा भयो तब यही बताइएको थियो कि सबै नर्मल छ ।
रोग कि आश्चर्य ?
भारतमा यसप्रंकारका बच्चालाई अलग अलग दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ । कसैले यसलाई शुभ मान्दछन् भने कतिले यसलाई अशुभ, र विचित्र । तर के वास्तवमै यसप्रकारको बच्चाको जन्म कुनै आश्चर्य हो कि कुनै रोग ?
मैक्स हस्पिटलका बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर कपिल विद्यार्थी भन्छन् कि यस्ता बच्चाको जन्म कुनै आश्चर्यको कुरा होइन । वास्तवमा यो पूरा घटना जम्ल्याहा बच्चासँग सम्बन्धित छ। आमाको गर्भमा अन्डा बनेपछि कयौ समस्याहरु उत्पन्न हुन सक्दछ, जसका कारण गर्भमा जम्ल्याहा बच्चा पूर्णरुपमा विकसित हुन पाउँदैन ।
डाक्टर विद्यार्थी आफ्नो कुरा यसप्रकार सम्झाउँछन्ः–
‘यस्तो मामिलामा अन्डाको जति भाग जोडिएको हुन्छ, त्यति विकसित नभएर भाग विकसित हुन्छ । र, शरीरको अंग बन्दछ । मतलब यदि कुनै अन्डा पूर्ण ढंगले दुई भागमा विभाजित भएन भने जब बच्चा जन्मन्छ उसको शरीरको अंग जोडिएको हुन सक्दछ ।
उनी भन्छन् ‘यदि आमाको गर्भमा अन्डा पूर्णरुपमा दुई भागमा विभाजित हुन्छ, तब बच्चा जम्ल्याह जन्मन्छन् । यदि अन्डा पूर्णरुपमा विभाजित भएन भने दुई प्रकारका बच्चा जन्मन सक्दछन् ।’
दुई प्रकारका जम्ल्याहा बच्चा
मैक्स हस्पिटलका बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर पी धर्मेन्द्र भन्छन् कि गोरखपुरमा जन्मेको बच्चा ‘पैरासिटिक ट्वीन’ को एउटा उदाहरण हो । सजिलो शब्दमा भन्ने हो बुझाउँदै डाक्टर धर्मेन्द्र भन्छन्–जम्ल्याहा बच्चा हुनु त थियो तर त्यो कुनै कारणले पूर्णरुपमा विकसित हुन सकेन र त्यसको शरीरको केही भाग मात्रै विकसित भयो । यसकारण पूर्णरुपमा विकासित नभएका कारण एउटै बच्चाको अतिरिक्त अंग बन्यो ।
यसरी नै कन्जाँइन्ड ट्वीन पनि हुन्छन् । यस्ता बच्चा जो विकसित त हुन्छन् तर उनीहरुको शरीरको केही भाग वा कुनै एउटा अंग जोडिएको हुन्छ । दुवै प्रकारको घटनामा बच्चाको अपरेशन गरेर अलग गर्ने गरिन्छ ।
डाक्टर धर्मेन्द्रका अनुसार यदि बच्चाको शरीरको तल्लो भाग जोडिएको छ भने त्यसलाई अपरेशन गरेर अलग गर्न सकिन्छ । यदि मेरुदण्डको हड्डीवाला हिस्सा जोडिएको छ भने त्यसलाई अलग गर्न केही मुश्किल हुन्छ । किनभने हुन सक्दछ कि यस्तो गर्दा बच्चाको लिङ्गले काम नगर्न सक्दछ ।
यदि आमाको गर्भमा यस्ता बच्चा हुर्किरहेको छ भने यसका बारेमा पत्ता लगाउन सकिन्छ र यदि आमाबाबुले चाहेका खण्डमा गर्भपतन गराउन सक्दछन् । डाक्टर भन्छन् कि चार वा पाँच महिनाको गर्भाधानमा सोनोग्राफी गराउँदा यो पत्ता लाग्छ कि बच्चाको स्थिति के छ ।
डाक्टर धर्मेन्द्र यो पनि भन्छन् कि यस्तो मामिलामा एउटा अर्को तरिका अपनाइन्छ । उनी भन्छन्–यदि गर्भवती महिलाको गर्भमा एकभन्दा बढी बच्चा छ र एउटा सही ढंगले विकसित भइरहेको छ र बाँकी भइरहेको छैन भने त्यसलाई इन्जेक्ट गरेर नष्ट गर्न सकिन्छ । ताकि जुन बच्चा सही ढंगले विकसित भइरहेका छन्, त्यसलाई आमाबाट प्राप्त हुने पोषण पूर्णरुपमा प्राप्त होस् । यदि यस्तो गरिएन भने आमाको पोषण ती सबै बच्चामा विभाजित हुन्छ र एउटा पनि बच्चा सही ढंगले विकसित हुन पाउँदैन ।
जम्ल्याहा बच्चा हुनुको कारण
बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर पी धर्मेन्द्रका अनुसार आईवीएफ (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन) का कारण जम्ल्याहा बच्चाको घटना बढी नै देखिन थालेको छ। उनी भन्छन्–आईवीएफको प्रयोग गर्ने महिलाको शरीरमा एकभन्दा बढी अन्डा पुग्ने गर्दछ । जसका कारण बच्चा जम्ल्याहा हुने घटना बढेको छ। अर्थात जति अन्डा त्यनि नै बच्चा हुने सम्भावना बढ्ने गर्दछ ।
आइवीएफ, यस्तो प्रविधि हो, जसको माध्यमबाट अन्डाणु र शुक्राणुलाई प्रयोगशालामा मिलाउने गरिन्छ । त्यसपछि यसबाट बनेको भ्रणलाई आमाको गर्भमा आरोपित गरिन्छ ।
यद्यपि डाक्टर धर्मेन्द्रका अनुसार यो घटना आईवीएफका कारण अधिक त हुन्छन् तर यो ती आमाहरुमा पनि हुन सक्दछ, जो प्राकृतिक तरिकाले गर्भधारण गरिरहेका हुन्छन्। बीबीसी हिन्दीबाट